Gargaarka Maaliyadeed ee Jaamacadda Hodges, oo looga dan leeyahay in laga dhigo Kulliyad la awoodi karo
Kaaliyaha Maaliyadeed ee Jaamacadda Hodges, Deeqda waxbarasho, Isbahaysiga, iyo Barnaamijyada qiimo dhimista
Jaamacadda Hodges, waxaan ognahay in mararka qaar wadista ardaygu inuu guuleysto aysan u dhigmin macnaha ay u leeyihiin inay ku sii wataan waxbarashadooda. Taasi waa sababta aan ugu heellan nahay inaan ka caawinno ardayda helitaanka kaalmada maaliyadeed iyo fursadaha deeqaha waxbarasho si aan uga caawinno waddooyinkooda guusha. Marka lagu daro 11-ka milyan ee doolar ee EASE deeqda ah ee aan qaybinnay, waxaan haynaa tiro deeqo waxbarasho oo hay'adeed ah, barnaamijyo dhimista sicirka, iyo qorshooyinka lacag-bixinta sidoo kale
Noocyada Gargaarka La Heli Karo:
Maal gasho Naftaada. Waa maalgashiga ugu wanaagsan ee Aad Waligaa Sameyso!
Isbahaysiga Loo shaqeeyaha
Helitaanka shahaadada kuleejka waa mid ka mid ah maalgashiyada ugu muhiimsan ee aad sameyn doonto, waxaanan si adag u aaminsanahay inaad ku qanacsan tahay maalgashigaaga Jaamacadda Hodges.
Xafiiska Adeegyada Maaliyadeed ee Ardayda ee Jaamacadda Hodges wuxuu u habeeyay takhasusleyaal kaa caawiya ikhtiyaarrada kharashka waxbarashada sida kaalmada dhaqaale, xisaabaadka ardayda, iyo kaalmada xalka buugga. Khabiirkaaga Gargaarka Maaliyadeed wuxuu ku siin karaa taageero maalgelinta waxbarashadaada marka ilaha shaqsiyadeed iyo kuwa qoysku aysan ku filneyn.
Maalgeli mustaqbalkaaga waxbarasho oo buuxi arjiga FAFSA maanta. Jaamacadda Hodges koodhka FAFSA waa 030375.
Jaamacadda Hodges koodhka FAFSA waa 030375.
Tilmaamaha Hodges FAFSA
Talaabooyinka Codsiga Gargaarka Dhaqaale
1. Buuxi FAFSA
Dhameystirka Codsiga Bilaashka ah ee Gargaarka Ardayga ee Federalka (FAFSA) waa talaabada ugu horeysa ee loo helo kaalmada federaalka ee kulleejada. Buuxinta iyo soo gudbinta FAFSA waa bilaash waana dhakhso, waxayna ku siineysaa inaad hesho isha ugu weyn ee kaalmada maaliyadeed ee lagu bixiyo kulliyadda. Waxay sidoo kale go'aamin kartaa u-qalmitaankaaga kaalmada gobolka iyo dugsiga. Hodges 'lambarka FAFSA waa 030375.
2. La shaqee lataliye
Jaamacadda Hodges, la-taliyayaasha kaalmada maaliyadeed waxay kaa caawin karaan inaad fahamto xulashooyinkaaga ku saabsan bixinta kuleejka waxayna kugu hagi doonaan habka aad ku dalbanayso noocyada kala duwan ee kaalmada lacageed ee jira.
3. Baadh deeqaha, deeqaha waxbarasho, amaahda, iyo xulashooyinka waxbarasho-shaqo
Deeqaha iyo deeqaha waxbarasho waxaa lagu bixiyaa iyadoo loo eegayo labadaba baahida iyo mudnaanta waana lacag la'aan lacag la'aan ardayda buuxisa shuruudaha u-qalmitaanka. Ka duwan deeqaha, amaahdu waa lacagaha ay amaahataan ardayda iyo / ama waalidkood waana in lagu bixiyaa dulsaar. Barnaamijyada barashada shaqada waxay ardayda u oggolaadaan inay qabsadaan shaqooyin nus ah inta ay ka diiwaangashan yihiin Jaamacadda Hodges.
4. Soo gal warqaddaada abaalmarinta
Waraaqdaada Abaalmarinta waxay kuu sheegaysaa barnaamijyada kaalmada dhaqaale ee aad ka heli karto waxbarashadaada Jaamacadda Hodges. Warqadda waxaa ku jira noocyada iyo xaddiga gargaarka lacageed ee aad ka heli karto ilaha federaalka, gobolka, iyo iskuulka.
Ilaha Maalgelinta Dheeraadka ah
Noocyada Gargaarka ee Kala Duwan
Deeqaha iyo deeqaha waxbarasho ee kuleejka waxaa lagu bixiyaa iyadoo loo eegayo baahida iyo mudnaanta.
Deeqda waxbarasho ayaa asal ahaan lacag la'aan u ah ardayda buuxisa shuruudaha u-qalmitaanka.
Amaahda ardaydu waa lacagaha ay amaahataan ardayda iyo / ama waalidkood oo lagu bixiyo dulsaar.
Kheyraadka Maalgelinta Dheeraadka ah
Raadiyaha Deeqaha Niche
Raadi Shahaadada Deeqaha Gaarka ah
Halyeey / Gargaar waxbarasho oo gaar ah
Kheyraadka Maalgelinta Gobolka
FUDUD / FARAN
Jaamacadda Hodges waxay hadda kaqaybqaadaneysaa barnaamijka 'EASE' (oo hore loo oran jiray FRAG). 5tii sano ee la soo dhaafey, Jaamacadda Hodges waxay awood u yeelatay inay siiso EASE in ka badan 7,500 oo arday iyada oo ugu yaraan $ 11M ay ku maalgelinayso deeqda waxbarasho.
Jaamacadda Hodges waxay hadda kaqaybqaadaneysaa Barnaamijka Mustaqbalka Bright.
Lacag Bixinta Florida
Jaamacadda Hodges waxay la shaqeysaa Florida Pre-Paid waxayna u oggolaaneysaa ardayda inay uga faa'iideystaan ​​maalgelintooda FPP go'aankooda.
Florida oo dhammeystiran waxaa loo sameeyay inay ka caawiso gobolka in ka badan 2.8 milyan oo qaangaar ah oo kasbaday amaah jaamacadeed, laakiin aan helin shahaado. Qaybta ugu fiican, maadaama ay Florida oo dhammeystiran ay maalgeliso gobolka Florida, adeegyada ay bixiyaan waa bilaash.
Barnaamijka Milatariga Waajibaadka Firfircoon - $ 250 sicir-dhimista waxbarashada saacaddii amaahda
Qiima dhimista Shaqada ee Milatariga ah ayaa loo heli karaa Xubnaha Adeegga Cinwaanka ah ee Shaqada Cinwaanka 10 iyo Xubnaha Firfircoon ee Difaaca iyo Kaydka (AGR) sida hoos lagu qeexay. Sicir-dhimistaan ​​ayaa loo heli karaa wixii u qalma ee doonaya shahaadada koowaad ee jaamacadeed ama arday qalin jabiya.
Barnaamijka Halyeeyga - $ 100 sicir-dhimista waxbarashada saacaddii amaahda / $ 2 laga dhimay (heerka $ 10) sicir-dhimis saacaddiiba
Qiime dhimista Halyeeyga waxaa heli kara halyeeyo si sharaf leh loo fasaxay oo aan u qalmin wax Waaxda Arimaha Halyeeyada ama waxtarrada waxbarashada ee Waaxda Difaaca. Qiimo-dhimistaan ​​ayaa loo heli karaa wixii u qalma ee doonaya shahaadada koowaad ee jaamacadeed ama ardayda qalin-jabisa.
Barnaamijka CareerSource - $ 100 sicir-dhimista waxbarashada saacaddii amaahda
Qiime dhimista CareerSource waxaa heli kara ardayda ka diiwaangashan kalfadhiga hadda jira oo ka helaya kaalmo dhaqaale CareerSource kharashaadka waxbarashadooda.
Loo-shaqeeyaha / Barnaamijka Isbahaysiga Shirkadeed - $ 100 qiimo dhimis waxbarid saacaddii amaah ah
Qiima dhimista Loo-shaqeeyaha / Shirkadaha waxaa heli kara ardayda ka diiwaangashan kalfadhiga hadda oo ay u shaqeeyaan mid ka mid ah Isbahaysiga Loo shaqeeyaha / Iskaashatada Jaamacadda Hodges. Liistada xulafada hadda jirta hoos ayaa laga heli karaa.
Barnaamijka Qalinjabinta Jaamacadda Hodges (HUGS) - $ 100 qiimo dhimis waxbarid saacaddii amaah ah
Qiime dhimista HU waxaa loo heli karaa ardayda ka diiwaangashan kalfadhiga hadda jira oo dhameeyay shahaadada koowaad ee jaamacadda Hodges oo hadda dhameystiraya shahaadada koowaad ee heerka labaad ee jaamacadda Hodges.
Fadlan tixraac Buugga Ardayga si dib loogu eego faahfaahinta ku saabsan barnaamij kasta oo qiimo dhimis ah iyo u-qalmitaanka.
Dhimista Isbahaysiga Shirkadaha
Caymiska Brown & Brown
Xafiiska Sheriff County Charlotte
Chico ee FAS, Inc.
Magaalada Ft. Waaxda Booliska Myers
Magaalada Jasiiradda Marco
Dowlada Hoose ee Collier
Dugsiyada Dadweynaha ee Degmada Collier
Xafiiska Sheriff ee Degmada Collier
Xarunta David Lawrence
Glenview ee Pelican Bay
Samatabbixinta Dabka Dahabka ah
Degmada Dugsiga Degmada Hendry
Adeegyada Daryeelka Caafimaadka
Gudiga Deegaanka ee Lee Commissioner of County
Dugsiyada Dadweynaha ee Degmada Lee
Xafiiska Degmada Sheriff
Nidaamka Caafimaadka ee 'Memorial Memorial'
Kooxda Dhakhaatiirta Millennium
Kooxda Caafimaadka ee Naples
Nidaamka Daryeelka Caafimaadka ee NCH
Dhakhaatiirta Daryeelka Koowaad ee SWFL
Dhakhaatiirta Nidaamka Daryeelka Caafimaadka Gobolka
Ma xiiseyneysaa Isbahaysi Shirkadeed? La xiriir Xiriiriyaha Gaarsiinta & Shaqaalaynta Bulshada, Angie Manley, CFRE 239-938-7728 ama emayl amanley2@hodges.edu.
Waxbadan Ka Baro Barnaamijyadeena deeqaha waxbarasho
Guudmarka Macluumaadka Deeqaha Jaamacadeed ee Hodges
Deeqaha ayaa lagu bixin doonaa iyada oo ku saleysan shuruudaha loo dejiyey ee Abaalmarin kasta oo deeq waxbarasho ah oo ka hooseysa jaamacadda iyo / ama qeexitaannada deeqaha.
Ka dib markay Guddiga Deeqda waxbarasho helaan, u codeeyaan oo ay ansixiyaan dhammaan deeqaha waxbarasho xilli kasta, liistada qaataha waxaa loo gudbin doonaa Xafiiska Adeegyada Maaliyadeed ee Ardayda ujeeddooyin bixinta.
Abaalmarinta deeqda waxbarasho ayaa si isku mid ah loo miisaami doonaa iyadoo lagu saleynayo waxqabadka tacliinta / celceliska dhibcaha (GPA), heerka isqorista (saacadaha amaahda saacaddiiba), baahida dhaqaale / qiyaasta tabarucaada qoysaska (EFC), iyo qormada arjiga / wareysiga (haddii loo baahdo).
Shuruudaha U-qalmitaanka Dhammaan deeqaha waxbarasho
Arday shahaadada koowaad ama heerka qalin-jabinta ah oo xaalad wanaagsan ku jira kalfadhigooda hadda ugu yaraan ugu yaraan GPA isku-darka ah ee 2.0 ee shahaadada koowaad iyo 3.0 GPA ee ardayda qalin-jabisay laga jaray dhammaan deeqaha iyo khidmadaha jira.
Dhammaan deeqaha waxbarasho ee hoose waxay u baahan karaan shuruudo dheeri ah si ardaygu ugu qalmo deeqda waxbarasho.
Ardayda qaata sicir-dhimista waxbarashada iyo / ama ka-dhaafidda waxbaridda iyada oo qayb ka ah heshiisyada kale ee jaamacadeed ama siyaasadaha ayaa xaq u yeelan doonin inay helaan deeqo waxbarasho oo hay'adeed maaddaama maalgelinta noocan ah sidoo kale lagu sifeeyay inay tahay gargaar hay'adeed.
Dhammaan codsiyada iyo waraaqaha tixraaca waxay noqonayaan hantida Jaamacadda Hodges dibna looma celin doono.
Codsi kasta oo deeq-waxbarasho ah oo lagu helo inay ku jiraan macluumaad been ah ama marin habaabin ah ayaa laga tirtirayaa tixgelinta dheeraad ah ee Guddiga Deeqda-waxbarasho.
Qoraallada, haddii loo baahdo, waxaa lagu xukumi doonaa qiyam rubric ah oo ay ku jiri doonaan qaab / nuxur ahaan iyo sidoo kale xirfadaha qorista oo cad, hadal, abaabul macquul ah, oo muujinaya faham aan caadi ahayn oo ku saabsan arrimaha falsafada iyo cilmu-nafsiga ee ku lug leh mawduuca loo qoondeeyay ).
Sanduuqa Kulliyadda Madaxa Bannaan ee Florida
Xubin ka ah Kulliyadaha Madaxa Bannaan iyo Jaamacadaha Florida (ICUF), Jaamacadda Hodges waxay fursad u leedahay inay codsato deeqo waxbarasho oo ay bixiso Sanduuqa Florida Independent College Fund (FICF). FICF waa aasaas aan faa'iido doon ahayn oo loogu talagalay barnaamijka iyo horumarinta ilaha ee Kulliyadaha Madaxa-bannaan iyo Jaamacadaha Florida (ICUF). Waxay ka heshaa lacagaha deeq-bixiyeyaasha gaarka loo leeyahay, warshadaha, iyo ganacsiyada, iyo sidoo kale gobolka Florida. Deeqaha waxbarasho ee FICF waxay leeyihiin qaabab iyo shuruudo u gaar ah tixgelinta. Guddiga Deeqda-waxbarasho ee Jaamacadda Hodges waxay dib-u-eegis ku sameeyaan codsiyada ardayda ee kaalmada maalgelinta gaarka loo leeyahay ee HU iyo sidoo kale guud ahaan ardayda si loo helo magacaabis ku habboon abaalmarinta FICF.
Haddii arday la siiyo deeqda waxbarasho ee FICF oo qadarka uu ka sarreeyo isku darka isku darka deeqda waxbarasho ee gaarka loo leeyahay oo lagu muujiyey lambarka labaad ee tilmaamaha, markaa ardayga looma tixgelin karo inuu u qalmo waxtar kale oo dheeraad ah oo laga helo Guddiga Deeqda-waxbarasho ee Jaamacadda Hodges.
Muuqaalka, soo bandhigida, iyo dhammeystirka foomka dalabka waxaa lagu xisaabtami doonaa bixinta deeqaha waxbarasho. Codsiyada aan dhameystirneyn lama tixgelin doono. Dhammaan codsiyada iyo waraaqaha tixraaca waxay noqonayaan hantida Jaamacadda Hodges dibna looma celin doono.
Qormooyinka, haddii loo baahdo, waxaa lagu xukumi doonaa qaab iyo nuxur ahaan iyo sidoo kale qoraal si cad, qeexan, macquul ah u abaabulan, oo muujinaya garasho aad u wanaagsan oo ku saabsan arrimaha falsafada iyo cilmu-nafsiga ee ku lug leh mowduucyada loo xilsaaray.
Guddiga Deeqda-waxbarasho ee Jaamacadda Hodges ayaa wareysan kara codsadayaasha iyadoo qayb ka ah hawsha haddii ay dhacdo macluumaad dheeri ah ayaa looga baahan yahay habka go'aanka.
Marka la bixinayo deeqaha waxbarasho, Guddiga Deeqda-waxbarasho ee Jaamacadda Hodges waxay xukumayaan codsadayaasha iyada oo lagu saleynayo (1) waxqabadka tacliimeed, (2) qoritaanka dalabka musharraxa, haddii loo baahdo, (3) wareysiyo shaqsiyeed, haddii loo baahdo, (4) baahi dhaqaale, iyo (5) ) dhammaystirka arjiga.
Deeqda waxbarasho ee ay bixiso FLORIDA COLLEGE FUND (FICF) MADAXBANAANNA waxaa loo tixgeliyaa inay la mid yihiin deeqaha kale ee gaarka loo leeyahay ee Jaamacadda Hodges Ardayda waxaa loo magacaabay abaalmarinta FICF ee Guddiga Deeqda Jaamacadda Hodges. Qaddarka abaalmarinta ee ay dejisay FICF way kala duwanaan karaan.
Deeqda Sanduuqa Hawks
Deeqda Sanduuqa Hawks (oo sidoo kale loo yaqaan sanduuqa guud ee deeqda waxbarasho) waxaa ku jira tabarucaad guud oo laga helo deeq-bixiyeyaasha deeqsinimada leh ee si joogto ah jaamacadda u siiya. Maalgelintaani waxay ka kooban tahay deeqaha waxbarasho ee soo socda:
Deeqda waxbarasho ee Gaynor Hawks Fund
Deeqda waxbarasho ee Thelma Hodges Hawks
Deeqda Sanduuqa CenturyLink Hawks Fund
Deeqda waxbarasho ee 'Pettit Hawks Fund'
Iyada oo ku xiran dhammaan qeexitaannada, sida kor lagu sheegay, ee ku saabsan "Shuruudaha U-qalmitaanka Dhammaan deeqaha waxbarasho. ”
Ardayda shahaadada-jaamacadeed-doonka ah waxay ku xadidan yihiin qaddiyadahan soo socda halkii kulan:
Ka diiwaangashan 1-8 saacadaha deynta: illaa $ 500
Ka diiwaangashan 9-11 saacadaha deynta: illaa $ 1000
Ka diiwaangashan 12 ama ka badan saacadaha deynta: illaa $ 1500
Ardayda shahaadada doonka ah ee qalin-jabinta ah waxay ku xadidan yihiin qaddiyadahan soo socda halkii kulan:
Ka diiwaangashan 1-5 saacadaha deynta: illaa $ 500
Ka diiwaangashan 6-8 saacadaha deynta: illaa $ 1000
Ka diiwaangashan 9 ama ka badan saacadaha deynta: illaa $ 1500
Waxaan haynaa arday aad u tiro badan oo codsanaysa deeqda waxbarasho ee loo yaqaan 'Hawks Fund Scholarship' bil kasta, bil walba billowgeeda; si kastaba ha noqotee, Guddiga deeqaha ayaa ka warqabaya isku dheelitirka maaliyadeed ee hadda jira waxayna xaddidi karaan maalgelinta la bixin karo bil kasta.
Caawinta deeqda waxbarasho ee Halyeeyada Waxbarashada (SAVE) Sanduuqa
Iyada oo ku xiran dhammaan qeexitaannada sida kor lagu sheegay ee ku saabsan "Shuruudaha U-Qalmitaanka Dhammaan deeqaha waxbarasho”; iyo
Waa inuu noqdaa halyeey ama xaas / ku tiirsane naafada ama halyeey dhintay oo raadinaya shahaadada koowaad ama qalin-jabinta.
Sanadihii la soo dhaafay, maalgalintaan waxaa la qabtay illaa shuruudaha xagaaga si loogu qoondeeyo maalgelinta ciyaar federaalku u xilsaaray dheefaha VA Yellow Ribbon; si kastaba ha noqotee, halyeeyadii u baahnaa lacagaha VA Yellow Ribbon sanadkii la soo dhaafay ayaa hoos u dhigay macnaha in aan bilaabi karno bixinta lacag badan oo SAVE hore u socota.
Jerry F. Nichols Deeqaha Xisaabinta
Iyada oo ku xiran dhammaan qeexitaannada sida kor lagu sheegay ee ku saabsan "Shuruudaha U-Qalmitaanka Dhammaan deeqaha waxbarasho";
Barnaamijka shahaadada tacliimeed waa inuu ku jiraa Xisaabaadka;
Xaaladda isdiiwaangelinta waqtiga-buuxa ah (12 ama ka badan dhibco UG; 9 ama dhibco ka badan oo loogu talagalay GR); iyo
Ugu yaraan 3.0 GPA midkoodna shahaadada koowaad- ama ardayda heerka qalin-jabinta ah.
Ardayda waxaa la siin karaa abaalmarin illaa $ 1500 halkii kulanba.
Helitaanka maalgelinta ayaa si aad ah u xaddidan halka ay sidoo kale jiraan shuruudo gaar ah oo tiro aad u tiro badan oo ardayda xisaabaadka-waaweyn ah aysan hadda haynin.
Jerry F. Nichols Deeqda Xisaabaadka Halyeeyada
Halyeey / xaalad militari ayaa doorbiday, laakiin waa la siin karaa arday aan lahayn xaalad militari / halyeynimo haddii aan loo arkin arday u qalma;
Helitaanka maalgelinta ayaa si aad ah u xaddidan halka ay sidoo kale jiraan shuruudo gaar ah oo tiro aad u tiro badan oo ardayda xisaabaadka-waaweyn oo lagu daray xaalad halyeey aan hadda haynin.
Naples Waqooyiga Rotary Scholarship
Arday ka qalin jabiyay Dugsiyada Degmada Collier ama degan Degmadda Collier;
Kaqeybgal uguyaraan hal (1) Naples North Rotary kulanka, iskuduwaha iyada oo loo marayo Jaamacadda Hodges (Agaasimaha Horumarinta Jaamacadda) iyo xubin naadi ah; iyo
Kaqeybqaado hal (1) Naples North Rotary mashruuca adeegga sanadka gudihiisa la helay.
Tilmaamaha deeq-lacageedka sida loogu talagalay deeq-bixiyuhu wuxuu yareynayaa qadarka codsiyada deeq-lacageedka ee ay helaan Guddiga Deeqda-waxbarasho ee gaarka u leh deeqdan waxbarasho. Nasiib darrose, ardaydu waxay dareemayaan inay awoodi kari waayaan inay ka qaybgalaan shirarka la cayimay iyo / ama inay ka qaybgalaan mashruuc (yada) adeegga sababo la xiriira noloshooda gaarka ah iyo jadwalka shaqada.
Deeqaha Aasaaska Meftah ee loogu talagalay Hooyooyinka Keli ah
Waa inay ahaato hooyo kaligeed haysata caruur yar yar oo guriga ku nool;
Ka diiwaangashan xerada ama barnaamijka tacliinta ee internetka; iyo
Raadinta shahaado jaamacadeed si loo kordhiyo fursadaha shaqo iyo dakhliga qoyska.
Hal (1) qaataha waxaa la siin karaa $ 2500, sanadkii, inta lagu jiro fadhiga Fall.
Waxaa jira lacag aad u tiro badan oo la heli karo; nasiib daro, qawaaniinta ka timid deeq bixiyaha awgeed, $ 2500 oo maaliyad leh oo kaliya hal (1) qaataha waa xaddiga ugu badan ee la bixin karo sanadle ahaan.
Deeqda Aasaasiga Moorings Park ee Kalkaalinta
Arday ku sii socda shahaadada Bachelor-ka ee Kalkaalisada; iyo
Mudnaanta ayaa la siin doonaa dadka qaata ee deggan Degmadda Collier, laakiin looma baahna.
Ardaydu waxay ku xadidan yihiin qaddarka soo socda halkii kulan:
Deeqdani waxay ku saleysan tahay qeexitaanka barnaamijka kaas oo leh tiro aad u tiro badan oo arday ah barnaamijka halka ay jiraan xaddi lacageed oo xadidan oo la helo sanadkiiba.
Moorings Park Foundation Deeqaha Caafimaadka Maskaxda Caafimaadka
Arday ku socda shahaadada Masterka ee La-talinta Caafimaadka Maskaxda Caafimaadka; iyo
Halyeey si sharaf leh shaqada looga joojiyay;
Qoraalka wax ka qabashada diiwaanka adeegga milatari ee shakhsi ahaaneed oo ay ku jiraan himilooyinka iyo qorshooyinka xirfadeed ee qalin-jabinta kadib;
Xaaladda isdiiwaangelinta waqtiga-buuxa ah (12 ama ka badan dhibco UG; 9 ama dhibco ka badan oo loogu talagalay GR);
Degane degan Collier, Lee ama Degmada Charlotte; iyo
Ugu yaraan 2.5 GPA midkoodna shahaadada koowaad- ama ardayda heerka qalin-jabinta ah.
Qadarka deeqda waxbarasho wuxuu la mid noqon doonaa kharashka keliya ee wax lagu barto ee ah (1) koorso halkii kulanba.
Deeqda waxbarasho waxay ku egtahay laba iyo toban (12), sanadkiiba.
Tilmaamaha deeqaha waxbarasho waxay keenaan tiro kooban oo codsiyo ah, gaar ahaan qaybta maqaalka. In kasta oo arday badani aysan ka helin qorista / curinta qormooyinka, Xafiiska Adeegyada Maaliyadeed ee Ardayda 'Kooxda Adeegyada Halyeeyada waxay bilaabeen inay wadahadal la yeeshaan ardayda halyeeyada ah ee ku saabsan qorista qormada iyo ka caawinta howsha.
Xaddiga ugu badan ee sanadkii la bixiyo deeqaha ayaa sidoo kale soo bandhigaysa walaac; haddii Guddiga deeqaha waxbarasho ay awoodaan inay abaalmarin siiyaan 12 arday, lacagta ugu badan ee la isticmaalo waxay noqonaysaa $ 27,000 sanadkii.
John & Joanne Fisher Deeq waxbarasho
Halyeeyga ama xaaskiisa halyeey si sharaf leh shaqada looga ceyriyay;
Qoraalka wax ka qabashada diiwaanka adeegga milatari ee shakhsi ahaaneed ama aragtida lammaanaha ee saameynteeda oo ay ku jiraan himilooyinka iyo qorshooyinka mihnadeed ee qalin-jabinta kadib;
Deeqda waxbarasho ayaa ku kooban laba iyo toban (12) abaalmarin, sanadkiiba.
Haddii halyeeyo aqoon leh ama xaasaska halyeeyada aan la heli karin, deeqaha waxbarasho waxaa la siin karaa arday Fisher School of Technology (FSOT).
Earl & Thelma Hodges Deeq waxbarasho
Qoraalka wax ka qabashada caqabadaha shaqsiyeed ka hor inta aan lagu qorin Jaamacadda Hodges iyadoo waliba ay ku jiraan yoolalka iyo qorshooyinka mihnadeed ee qalin-jabinta ka dib.
Degane degan Collier, Lee, Charlotte, Glade ama Hendry County; iyo
Deeqda waxbarasho oo ku xaddidan laba (2) abaalmarin sanadle ah, oo u gaar ah xilliga deyrta iyo xilliga qaboobaha oo keliya.
Tilmaamaha deeqaha waxbarasho waxay keenaan tiro kooban oo codsiyo ah, gaar ahaan qaybta maqaalka. In kasta oo arday badani aysan ka helin qorista / abuurista qormooyinka, Xafiiska Adeegyada Maaliyadeed ee Ardayda wuxuu si dhow ula shaqeeyaa Xafiiska Khibradda Ardayga si uu si wanaagsan ugu sharxo hannaanka qormada iyo sida loo qoro qormo wax ku ool ah.
Xaddiga ugu badan ee sanadkii la bixiyo deeqaha ayaa sidoo kale soo bandhigaysa walaac; haddii Guddiga deeqaha waxbarasho ay awoodaan inay abaalmarin siiyaan 2 arday, lacagta ugu badan ee la isticmaalo waxay noqonaysaa $ 4,500 sanadkii.
Earl & Thelma Hodges Deeq waxbarasho Veterans
Qoraalka wax ka qabashada diiwaanka adeegga milatari ee shakhsi ahaaneed oo ay ku jiraan himilooyinka iyo qorshooyinka xirfadeed ee qalin-jabinta kadib; iyo
Ugu yaraan heerka isqorista-waqtiga-dhiman (ugu yaraan 6 ama dhibco ka badan halkii kulanba).
Jeanette Brock LPN deeq waxbarasho
Barnaamijka shahaadada waa inuu ku jiraa Kalkaaliye Caafimaad oo Shati Leh (LPN);
Ugu yaraan uguyaraan celcelis dhibic wadar ahaan isku-dhafan (GPA) ee 2.0.
Guddiga deeqaha waxbarasho ayaa ka warqabaya isku dheelitirka maaliyadeed ee hadda jira waxayna ku xaddidan yihiin inta maalgelin ee la bixinayo bil kasta.
Sideen U Dalbadaa Deeqaha Hay'adeed?
Abaalmarinta Guga waa nidaamkeena elektaroonigga ah ee ardaydu ka soo gali karaan (hal saxiix) oo ay ku buuxin karaan arjiga wixii deeq waxbarasho ah. Codsiga kahor, ardaydu way arki karaan macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan mid kasta oo ka mid ah deeqaha waxbarasho iyo shuruudaha loo baahan yahay si ay u helaan suurtogalnimada maalgelinta la codsaday. Waa aalad aad u fiican oo ardayda u oggolaaneysa inay hal ama dhowr deeq waxbarasho isla mar wada codsadaan. Waxaan hadda ka shaqeyneynaa casriyeynta nidaamkayaga Abaalmarinta Guga si ardaydu u arki karaan xitaa faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan deeqaha waxbarasho, shuruudaha loo baahan yahay, waqtiyada kama dambaysta ah ee codsi kasta oo deeq waxbarasho ah, iyo goorta la codsanayo deeq waxbarasho kasta - casriyayntaan ayaa imaanaysa kal-fadhiga Janaayo 2019 iyo wixii ka dambeeya.
Codso deeqaha waxbarasho ee hay'adeed
Diidmada Maalgelinta Deeqaha
Ujeeddada barnaamijka deeqda waxbarasho ee Jaamacadda Hodges waa in lagu kabo ilaha ardayda illaa inta suurtagal ah si loogu suurtogeliyo inay bilaabaan ama sii wataan barashada jaamacadda. Dhammaan ardayda waxay xaq u leeyihiin inay codsadaan deeqo waxbarasho. Fadlan xusuusnow in haddii arday uu mar hore helayo qiimo dhimis waxbarid iyo / ama ka dhaafis waxbarid iyada oo qayb ka ah heshiisyada kale ee jaamacadaha ama siyaasadaha, maalgelinta noocan ah waxaa lagu sifeeyay inay tahay gargaar hay'adeed ardaydaasna xaq uma yeelan doonaan inay helaan labada qiimo dhimis / dhaafid iyo deeqaha waxbarasho ee hay'adaha.
Shuruudaha caalamiga ah ee u-qalmitaanka deeqaha waxbarasho ee hay'adda waxaa ka mid ah, laakiin aan ku xaddidnayn: Ardaydu waa inay ahaadaan kuwa shahaadada koowaad haysta ama kuwa qalin-jabiya oo xaalad wanaagsan ku jira kalfadhigooda hadda ugu yaraan ugu yaraan celcelis dhibco isugeyn ah (GPA) ee 2.0 ee ardayda dhigata shahaadada koowaad iyo 3.0 GPA ardayda qalin jabisa. Abaalmarinta deeqda waxbarasho ee shaqsiyeed waxaa laga yaabaa inay lahaato macluumaad dheeri ah iyo shuruudaha u-qalmitaanka oo laga heli karo hoos.